မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့် Dopamine - ပုံရိပ်လေ့လာခြင်းနှင့်ကုသမှု၏ရလဒ်များ (၂၀၀၇) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက် Dopamine: Imaging ကလေ့လာရေးရလဒ်များနှင့်ကုသရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု (2007)
comments: စွဲနှောက် dopamine မှယုတ်လျော့ sensitivity ကိုခံစားနေရပေမယ့်လည်းလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ဖြန့်ချိလျော့နည်း dopamine မသာ။
Nora ဃ Volkow, MD, ဟန္နအက်စ်မုဆိုး, Ph.D; မျိုးဗီဇ-ဂျက်ဝမ်, MD, James M. Swanson, Ph.D; ဖရန့် Telang, MD
imaging လေ့လာမှုများလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် dopamine (DA) ၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကလူသားတွေအတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုကို (နျူကလိယ accumbens အပါအဝင်) ကို striatum အတွက်တစ်ဦးလျှင် se DA တိုးပေါ်ပေမယ့် DA တိုးနှုန်းအပေါ်မဟုတ်ပဲဆက်ပြောပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမြန်မြန်တိုး, ပိုပြင်းထန်သောအဆိုပါအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ သူတို့ကအစစွဲဘာသာရပ်မူးယစ်ဆေး (အေးစက်လှုံ့ဆော်မှု) ဖြင့်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိတွေ့သောအခါ dorsal striatum အတွက် DA ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်မူးယစ်ဆေးရယူဖို့ဖို့လှုံ့ဆျောမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုပြသခဲ့ကြသည်။ ဆနျ့ကငျြ, ရေရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပုံရသည် D2 DA receptors နှင့်စွဲဘာသာရပ်များအတွက် striatum အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်လျှော့ချခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ်, DA function ကိုလျော့နည်းသွားသည်။ ထို့အပြင် striatum အတွက် D2 DA receptors အတွက်လျှော့ချ implicates ရာ, ထို orbitofrontal cortex (salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများနှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဒေသ) ၏လျော့ချလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူနှင့် cingulate gyrus (inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့် Impulse နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဒေသ) ၏ဆက်စပ်နေကြသည် ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စွဲရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့ကြောင်း compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ဆုံးရှုံးမှုအတွက် DA အားဖြင့်တိုကျရိုကျဒေသထိန်းချုပ်မှုလျှော့ခြင်း။ DA ဆဲလ်မူးယစ်ဆေးယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်နောက်ထပ် conditional သင်ယူမှုခိုင်ခံ့စေနဲ့ automatic အပြုအမူတွေ (compulsive နှင့်အလေ့အထများ) ကိုထုတ်လုပ်လှုံ့ဆော်မှုအဓိကနှင့်အေးစက်သင်ယူမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်တုံ့ပြန်မှုအတွက်မူးယစ်ဆေးများက၎င်းတို့၏ activation အလွန်အမင်းအဓိကအဖြစ်ကြုံတွေ့လိမ့်မည်ပစ်ခတ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Dopamine (DA) ဂန္ထဝင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်နှင့်အစွဲတွေနဲ့ဆက်စပ် neurobiological အပြောင်းအလဲများကိုထွက်လာပါတယ်အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍရှိစေခြင်းငှါ၎င်း neurotransmitter ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအယူအဆအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးအပေါငျးတို့သနျူကလိယ accumbens အတွက် DA ၏ extracellular အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထင်ဟပ်။ DA အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်၏ဆုလာဘ်များနှင့်ခန့်မှန်း coding ထဲမှာအကျိုးကိုရယူဖို့ရန်စိတ်ခွန်အားနိုး drive ကို၌၎င်း, သင်ယူမှုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိသည်။1 ဒါဟာအစ, အပြင်ဆုချမှထားတဲ့, အကျိုးသည်ဒါပေမဲ့ saliency အဘို့မဟုတ့် DA codes တွေကိုယုံကြည်ဆန္ဒရှိဝတ္ထုနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုများပါဝင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ DA သက်ရောက်မှုများ၏မတူကွဲပြားဖွယ်ရှိကြောင့် modulates တိကျတဲ့ဦးနှောက်ဒေသများ (limbic, cortical နှင့် striatal) ကဘာသာပြန်ထားပါသည်။
ဤနေရာတွင်ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါး, မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲဘာသာရပ်များအတွက်ရေရှည်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနှင့်စွဲဖို့အားနည်းချက်များ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) အသုံးပြုခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကနေတွေ့ရှိချက်အနှစ်ချုပ်။ စွဲလမ်းပေါ်တွင်ပေလေ့လာမှုများအများစု DA အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြသော်လည်း, အခြား neurotransmitters (ဆိုလိုသည်မှာအချိုမှု, γ-aminobutyric အက်ဆစ်, opioids နှင့် cannabinoids) တွင်မူးယစ်သွေးဆောင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်လည်းပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ radioligands ၏မရှိခြင်းကန့်သတ်ထားပါတယ် သူတို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။
လူ့ဦးနှောက်အတွင်းသို့မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ထိရောက်မှု DA များ၏အခန်းကဏ္ဍ
လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ extracellular DA ပြင်းအားအပေါ်ရေတိုရေရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုထိုကဲ့သို့သောကာဗွန်2(နဲ့အတူတံဆိပ်ကပ် raclopride အဖြစ် endogenous DA နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့အထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းပေနှင့် D11 DA အဲဒီ receptor ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ligands, အသုံးပြု. လေ့လာခဲ့နိုင်ပါတယ်11ကို C) ​​။ ( "အမြင့်ဆုံး" နှင့် "Euphoria ပီတိ" ၏ Self-အစီရင်ခံစာများအားဖြင့်အကဲဖြတ်) လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ DA နှင့်သူတို့၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားဆက်ဆံရေးအတွက်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများ methylphenidate နှင့်စိတ်ကြွဆေးအဘို့ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ စိတ်ကြွဆေး, စိတ်ကြွဆေးကဲ့သို့ DA ပို့ဆောင်ရေးမှတဆင့် terminal မှပြုလုပ်ဖြန့်ချိခြင်းဖြင့် DA တိုးပွါးသော်လည်း Methylphenidate, ကိုကင်းများကဲ့သို့, DA ပို့ဆောင်ရေးပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် DA တိုးပွားစေပါသည်။ သွေးကြောသွင်း methylphenidate (0.5 / ကီလိုဂရမ် mg) နှင့်စိတ်ကြွဆေး (0.3 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကို striatum အတွက် DA ၏ extracellular DA အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာ, ဤတိုးမြင့် Euphoria ပီတိ Self-အစီရင်ခံစာများတွင်တိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။2 နှုတ်ပေးထားသည့်အခါမတူဘဲ, methylphenidate (0.75-1 / ကီလိုဂရမ် mg) ကိုလည်း DA တိုးလာပေမယ့်အားဖြည့်အဖြစ်ကိုရိပ်မိမခံခဲ့ရပါဘူး။3 ပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုတဖြည်းဖြည်း DA တိုးပွါးသော်လည်းသွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်ရေး, DA ပြောင်းလဲမှုများကိုအစာရှောငျမှဦးဆောငျသောကွောငျ့, ပါးစပ် methylphenidate နှင့်အတူမြင့်မားသောငှာစောင့်ရှောက်ဖို့ပျက်ကွက်ဖွယ်ရှိသည်၎င်း၏နှေးကွေး pharmacokinetics ထင်ဟပ်။ အမှန်စင်စစ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဦးနှောက်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့မှာမြန်နှုန်းသူတို့ရဲ့အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများထိခိုက်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။4 ဤသည်အသင်းအဖွဲ့လည်း [သုံးပြီး (ကိုကင်းများ၏ pharmacokinetics အကဲဖြတ်ကြောင်းပေလေ့လာမှုများအတွက်ပြသထားသည်11ကို C] ကိုကင်း) နှင့်အမတ် (သုံးပြီး [11ထိုသို့အစာရှောင်ခြင်းကဦးနှောက်ထဲသို့မူးယစ်ဆေး၏လွှာမှသော်လည်းမမြင့်မားလာပြီနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့နှုန်း se ဦးနှောက်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာကို C] methylphenidate) ။5 ဦး နှောက် pharmacokinetic ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများ၏မှီခို phasic DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်မှု (ကြိမ်နှုန်း> 30 Hz မှာအစာရှောင်ခြင်း - ပစ်ခတ်မှုပစ်ခတ်မှု) နှင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည် DA အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အဘယ်သူ၏ function ကို saliency ကိုမီးမောင်းထိုးပြဖို့လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲမှုများကို ဦး ဆောင်လမ်းပြသောဖြစ်နိုင်ခြေအသင်းအဖွဲ့, အကြံပြုထားသည် လှုံ့ဆော်မှု၏။6 ဤသည်မှာအဘယ်သူ၏ function ကို DA စနစ်၏ခြုံငုံတုန့်ပြန်တင်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်အခြေခံတည်ငြိမ်-ပြည်နယ် DA အဆင့်ဆင့်နှင့်ထိန်းသိမ်းထားရာ (5 Hz န်းကျင်ကြိမ်နှုန်းမှာနှေးကွေးပစ်ခတ်ရန်), ပစ်ခတ် DA ဆဲလ်လုပ်သူများမတူဘဲ၌တည်ရှိ၏။ ဤသည်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတူတဲ့ပေမယ် phasic DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်ထုတ်လုပ်သူတွေကိုကျော်လွန်ကြောင်း DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းကြောင်းမှနျးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။
လူ့ဦးနှောက်အတွင်းသို့ချိုးဖောက်မှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရေရှည်တွင်ဆိုးကျိုးများအပေါ် DA များ၏အခန်းကဏ္ဍ: စွဲပါဝင်ပတ်သက်
DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် Synaptic တိုးနှစ်ဦးစလုံးစွဲနှင့် nonaddicted ဘာသာရပ်များအတွက်မူးယစ်ဆေးမူးယစ်ကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါမူးယစ်ယူပြီးဆက်လက်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော drive ကိုအားလုံးဘာသာရပ်များအတွက်အစပျိုးခြင်းမရှိပါ။ ဒါကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုများဆုံးရှုံးမှုများနှင့်စွဲရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သော compulsive မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေဖြစ်သကဲ့သို့အရာကိုတစ်ယောက်တည်းရေတိုရေရှည်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် DA အဆင့်ကိုတိုးကဒီအခွအေနေကိုရှင်းပြလို့မရပါဘူး။ မူးယစ်ဆေးစွဲရေရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးလိုအပ်သောကြောင့်ကျနော်တို့လှုံ့ဆျောမှု / drive ကို, (သောကွောငျ့, မျိုးဗီဇဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေ၏) အားနည်းချက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်, စွဲဆုလာဘ် / saliency နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက် DA-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဦးနှောက်ဆားကစ်၏ထပ်ခါတလဲလဲထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းအကြံပြု , inhibitory ထိန်းချုပ်မှု / အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုများနှင့်မှတ်ဥာဏ် / အေးစက်။ ဤနေရာတွင်ကျနော်တို့ကဤအပြောင်းအလဲများကို၏သဘောသဘာဝအပေါ်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကနေတွေ့ရှိချက်ဆွေးနွေးပါ။
အတော်များများရေဒီယိုသတ္တိကြွ tracers (DA neurotransmission တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပစ်မှတ်ပြောင်းလဲမှုများအကဲဖြတ်ရန်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြစားပွဲတင် 1) ။ 18- အသုံးပြုခြင်းN-methylspiroperidol သို့မဟုတ် [11ကို C] raclopride, ငါတို့နှင့်အခြားသူများအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနှင့်အတူဘာသာရပ်များ (ကိုကင်း, ဘိန်းဖြူ, အရက်နှင့်စိတ်ကြွဆေး) အပြီးပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာလအတွင်းဆက်လက်ရှိကြောင်း (ထို ventral striatum အပါအဝင်) ကို striatum အတွက် D2 DA အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရှိသည်ပြခဲ့ကြ Volkow et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် detoxification (2) ။ ကျနော်တို့ကိုကင်းချိုးဖောက်လျော့နည်းသွား DA ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုအထောက်အထားလည်းထင်ရှားပါပြီ။ အထူးသကျနော်တို့ [သွေးကြောသွင်း methylphenidate အားဖြင့်သွေးဆောင် DA အဆင့်အတွက် striatal တိုး (နှင့်အတူအကဲဖြတ်ကြောင်းပြသ11ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက် DA အဆင့်ကိုတိုး (50% နိမ့်) နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာက C] raclopride) ကိုကင်းချိုးဖောက်သိသိသာသာကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခဲ့ကြသည်။7 methylphenidate အားဖြင့်သွေးဆောင် DA အာရုံစူးစိုက်မှုတိုး, DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်တစ် function ကို DA လွှတ်ပေးရေးအပေါ်မှီခိုနေကြသောကြောင့်, ကြှနျုပျတို့သညျဤခြားနားချက်ဖွယ်ရှိကင်းချိုးဖောက်လျော့နည်းသွား DA ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုထင်ဟပ်ကြောင်းခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။ အလားတူတွေ့ရှိချက်အရက်ချိုးဖောက်မှုများအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။8
စားပွဲတင် 1 ။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုအကြား DA Neurotransmission အတွက်ပါဝင်အမျိုးမျိုးသောပစ်မှတ် Comparing ပေလေ့လာရေးတွေ့ရှိချက်များ၏အနှစ်ချုပ်a အဆိုပါအဖွဲ့များအကြားစာရင်းအင်းကွာခြားချက်များဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဘယ်ဟာအဘို့နှင့် Non-မူးယစ်ဆေး-ချိုးဖောက်မှုများထိန်းချုပ်ရေးဘာသာရပ်များb
ဤရွေ့ကားဦးနှောက်-ပုံရိပ်လေ့လာမှုများဆုချနှင့်ဆက်စပ်သော DA ဆားကစ်၏လျော့နည်းသွား output ကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုစွဲဘာသာရပ်များအတွက်2မူမမှန်အကြံပြု; ဆိုလိုသတည်း (အနျူကလိယ accumbens အပါအဝင်) ကို striatum အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်အတွက် D2 DA receptors နှင့်လျှောက်လျော့နည်းအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသဘာဝစစ်ကူစွဲဘာသာရပ်များအတွက်လျော့နည်းသွား sensitivity ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသဘာဝစစ်ကူထက် DA-စညျးမဉျြးစညျးကမျးဆုလာဘ်ဆားကစ်ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့မှာပိုပြီးအစွမ်းထက်ကြောင့်ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးများနေဆဲချ-စညျးမဉျြးစညျးကမျးဆုလာဘ်ဆားကစ်ကဤကိုသက်ဝင်နိုင်ကြဖြစ်ကြောင်း postulated ။ ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏လျော့နည်းသွား sensitivity ကိုဖြစ်နိုင်သည်ယာယီအမြင့်ဆုံးခံစားရရန်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူပြီးထံမှခံစားရရန်သူတို့ကိုယူဖို့အကူးအပြောင်းအခြေခံသည်ဤဆုလာဘ်ဆားကစ်ကိုသက်ဝင်ဖို့နည်းလမ်းအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဆွရှာဘာသာရပ်များ predisposing, နေ့-to-နေ့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းသွားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ် ပုံမှန်။
Preclinical လေ့လာမှုများ orbitofrontal cortex (OFC) နှင့် anterior cingulate gyrus (CG) ပတျသကျတဲ့ DA-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပတ်လမ်းမှတဆင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့ပုံလှုံ့ဆျောမှုအတွက် DA တစ်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြပါပြီ။9 F ကို 18 fludeoxyglucose အဆိုပါရေဒီယိုသတ္တိကြွ tracer သုံးပြီးလူ့ဘာသာရပ်များအတွက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများတှငျကြှနျုပျတို့နှင့်အခြားသူများ (Volkow et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်စွဲဘာသာရပ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းထဲတွင် OFC နှင့် CG အတွက်လျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုပြခဲ့ကြ2) ။ ထိုမှတပါး, နှစ်ဦးစလုံး cocaine- နှင့်စိတ်ကြွဆေး-စွဲဘာသာရပ်များအတွက်ကျနော်တို့ OFC နှင့် CG အတွက်လျှော့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းပြသကြ Volkow et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ (striatum အတွက် D2 DA receptors ၏ရရှိမှုလျော့နည်းသွား7()ဂဏန်း) ။ အဆိုပါ OFC နှင့် CG အခြေအနေတွင်တစ် function ကိုအဖြစ်စစ်ကူဖို့တန်ဖိုးကို၏တာဝနျမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သောကြောင့်, အကြမ်းဖက်၎င်းတို့၏နှောင့်အယှက်အပြုအမူလှုံ့ဆျောမှုအဓိက drive ကိုဖြစ်လာခြင်း, အခြားရွေးချယ်စရာစစ်ကူတစ် function ကိုအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ saliency တန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင် ။ မူးယစ်ဆေး-အခမဲ့, စွဲဘာသာရပ်များမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-related လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါဤအဘာသာရပ်များအတွက်မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစစ်ကူများတိုးမြှင့် saliency တန်ဖိုးများနှင့်ကိုက်ညီဤဒေသများအတွက် activation တိုးမြှင့်ပြသသည့်အခါများ၏ပုံစံမတူဘဲ OFC နှင့် CG လှုပ်ရှားမှုလျော့သွားသည်။ ထို့အပြင် OFC နှင့် CG ၏တိုးမြှင့် activation မူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့အလိုဆန္ဒ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။ ဒါက OFC နှင့် CG အတွက် hypermetabolism မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးတွေကိုအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ထားပါတယ်ကြောင့် obsessive-compulsive မမှန်နှင့်အတူလူနာအတွက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူအခြေခံနည်းတူ, ထို compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအခြေခံ။10 အဆိုပါ OFC-CG ဦးနှောက်ဆားကစ်၏နှောင့်အယှက်၏ဤ dual-effect ကိုအဘယ်သူ၏မလှူမူးယစ်ဆေးယူဖို့မသိမြင်-based သဘောထားတွေကိုယှဉ်ပြိုင်မူးယစ်ဆေးပဓာနယူနိုင်ရန်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ၏အပြုအမူနှင့်ကိုက်ညီလျက်ရှိ၏ ကိုယ့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive မမှန်နှင့်အတူလူနာသည်အတိုင်း, မလှူသည့်အပြုအမူတွေရပ်တန့်ဖို့သိမြင်မှုကြိုးစားမှုကြားမှဆက်ရှိနေသေး။
တစ်ဦးက, D2 dopamine receptors (raclopride ကာဗွန် 11 နှင့်အတူအမည်တပ်ထားသော) ၏ကာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်အတွက်ဦးနှောက် function ကိုတစ်ဦးညွှန်ပြချက်များနှင့်တစ်ဦးကိုကင်းအကြမ်းဖက်အဖြစ်အသုံးပြုရသောဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ် (fludeoxyglucose) ၏ပုံများ။ ကိုကင်းချိုးဖေါက်မှုများ striatum အတွက်အနိမ့် D2 dopamine အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုပြုထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များထက် orbitofrontal cortex (OFC) တွင်အနိမ့်ဇီဝြဖစ်ရှိသည်။ detoxified ကင်းချိုးဖောက် B, D2 dopamine အကြားဆက်စပ်မှု (DA) receptors နှင့် orbitofrontal cortex (OFC) ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးအချိုးဖောက်ဆုံး detoxified ။ D2 DA အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု၏နိမ့်ဆုံးအတိုင်းအတာနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် OFC အတွက်နိမ့်ဆုံးဇီဝြဖစ်ရှိသည်သတိပြုပါ။
အကြီးစား View | ပုံကို Save | ဒေါင်းလုပ်လျှော (.ppt)
အဆိုပါ CG နှင့် OFC ကိုလည်း OFC ၏ DA မော်ဂျူနှောင့်အယှက်ကြောင့် postulate ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်သည့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့် CG လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲဘာသာရပ်များအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးစေတယ်။ နေကြသည်10 Inhibitory ထိန်းချုပ်မှု (Volkow et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်လည်းစွဲအတွက်ထိခိုက်သော dorsolateral prefrontal cortex ပေါ်တွင်မှီခိုဖြစ်ပါသည်2) ။ အဆိုပါ dorsolateral prefrontal cortex အတွက်မူမမှန်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးရှည်သောသိမြင်အပြောင်းအလဲများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိသည်သော Self-စောင့်ကြည့်မှုနှင့်အပြုအမူထိန်းချုပ်ချို့ယွင်းအပါအဝင်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်စဉ်များကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။10
conditional-မက်လုံးပေးသင်ယူမှု, အလေ့အထသင်ယူမှုနှင့် declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်အပါအဝင်မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှုအခြေခံ circuits, (Vanderschuren နှင့် Everitt အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်11), မူးယစ်ဆေးစွဲများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ မှတ်ဉာဏ်စနစ်များပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများများ၏သက်ရောက်မှုကြားနေလှုံ့ဆော်မှုအေးစက်-မက်လုံးပေးသင်ယူမှုမှတဆင့်သည်အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience ဆည်းပူးနိုင်သောနည်းလမ်းများကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သူတို့ကမူးယစ်ဆေးယူကြပြီနေရာများနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါမူးယစ်စွဲဘာသာရပ်များယခင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များငှါ၎င်း, စီမံခန့်ခွဲဖို့အသုံးပြု paraphernalia ငှါ, မူးယစ်ဆေးတစ်ခုပြင်းထန်သောဆန္ဒတွေ့ကြုံခံစားဘာဖြစ်လို့ relapse အပေါ်သုတေသနမှာ, နားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ခဲ့ မူးယစ်ဆေး။ Conditions တွေကို (မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်လှုံ့ဆော်မှု) မှထိတွေ့မှု relapse ဖို့ key ကိုပံ့ပိုးသောကွောငျ့ဤအဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ DA (Schultz အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ဆုလာဘ်များခန့်မှန်းအတူပါဝင်ပတ်သက်သောကွောငျ့9), ကျနော်တို့ DA တဏှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအေးစက်တုံ့ပြန်မှုအခြေခံအံ့သောငှါတွေးဆ။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာရေးဒီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့: ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူတွဲကြသောအခါ, သူတို့က, ထပ်ခါတလဲလဲအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူအေးစက်တွေကိုဖြစ်လာသည်နျူကလိယ accumbens နှင့် dorsal striatum အတွက် DA တိုးမြှင့်ဖို့စွမ်းရည်ဆည်းပူးပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်ဤ neurochemical တုံ့ပြန်မှု (Vanderschuren နှင့် Everitt အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်11) ။ လူသားနှင့်အတူပေလေ့လာမှုများ [အတွက်11ကို C] raclopride မကြာသေးမီကကင်းချိုးဖောက်မှုများ, မူးယစ်ဆေးတွေကို (ကိုကင်းတာဘာသာရပ်များ၏မြင်ကွင်းများ၏ကင်း-cue ဗီဒီယို) အတွက်သိသိသာသာအဆိုပါ dorsal striatum အတွက် DA တိုးလာနှင့်ဤတိုးကင်းတဏှာနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံဒီအယူအဆအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။12- 13 အဆိုပါ dorsal striatum အလေ့အထသင်ယူမှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကို ထောက်. စွဲ၏နာတာရှည်ဖြစ်စဉ်များအဖြစ်, ဒီအသင်းအဖွဲ့ဖွယ်ရှိအလေ့အထများ၏ခိုင်မာထင်ဟပ်။ ဒီအစွဲအတွက်အခြေခံ neurobiologic ပြတ်တောက်အလေ့အထအတွက်ရလဒ်တွေကိုအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုမှဦးဆောင်မယ့် DA-ဖြစ်ပေါ် conditional တုံ့ပြန်မှုဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုထားသည်။ အဲဒီအေးစက်တုံ့ပြန်မှု Vanderschuren နှင့် Everitt အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် DA လွှတ်ပေးရေး (ထိန်းညှိကြောင်း corticostriatal glutamatergic လမ်းကြောင်းထဲမှာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်ဟုယူဆရသည်11).
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု TO သို့ DA ထိခိုက်လွယ်
အချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းမူးယစ်ဆေးစွဲဖြစ်လာမှအခြားသူတွေထက်ပိုပြီးအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ neurobiology အတွက်စိန်ခေါ်မှုမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ imaging လေ့လာမှုများ DA ဆားကစ်အတွက် preexisting ကွဲပြားခြားနားမှုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတုန့်ပြန်အတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအခြေခံတဦးတည်းယန္တရားဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အထူးသ nonaddicted ဘာသာရပ်များအတွက် striatal D2 DA receptors ၏အခြေခံအစီအမံသွေးကြောသွင်း methylphenidate ကုသမှု၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုမှပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းပြခံပြီ သာယာသောအဖြစ်အတွေ့အကြုံဖော်ပြတစ်ဦးချင်းစီ Volkow et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ်မနှစ်မြို့ဖွယ် methylphenidate ဖော်ပြသူတို့အား (နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ D2 DA receptors ၏သိသိသာသာနိမ့်အဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့7) ။ လွန်းနည်းနည်းအားဖြည့်များအတွက်အကောင်းဆုံးမဖြစ်ပေမယ့်အလွန်အကျွံဆန္ဒရှိသည်: ။ ဒီ DA အဆင့်ဆင့်နှင့်အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေးတစ်ခုပြောင်းပြန်လှန် U-shaped ကွေးအောက်ပါအတိုင်းအကြံပြု ထို့ကြောင့်အမြင့်ဆုံး D2 DA အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်မှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ဘူး။ ဒီအတှကျပံ့ပိုးမှုဖွင့်-စည်းမျဉ်း D2 DA receptors ၏နျူကလိယအတွက်ယခင်က Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအရက်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သိသိသာသာလျှော့ချအရက်သေစာစားသုံးမှု accumbens ကွောငျးဖျောပွခဲ့ကြောင်း preclinical လေ့လာမှုများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်14 နှင့်ဖေါ်ပြခြင်းလက်တွေ့လေ့လာမှုများအားဖြင့်, အရက်တစ်သိပ်သည်းမိသားစုသမိုင်းရှိခြင်းရှိနေသော်လည်းအရက်သမားမဟုတ်ကြတဲ့သူဘာသာရပ်များထိုကဲ့သို့သောမိသားစုသမိုင်းနဲ့မပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု striatum အတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား D2 DA receptors ရှိခဲ့ပါတယ်။15 အဆိုပါ OFC နှင့် CG အတွက်ဇီဝြဖစ်သည်ဤဘာသာရပ်များမှာ D2 DA receptors မြင့်, မြင့်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ D2 DA receptors ၏မြင့်မား salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်တိုကျရိုကျဆားကစ်ပြောင်းလဲပစ်အားဖြင့်အရက်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အံ့သောငှါ postulate ။
imaging လေ့လာမှုများလူသားတွေအတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍကို corroborated ခဲ့ကြပြီးမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် DA ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အစဉ်အလာအမြင်များတိုးချဲ့ပါပြီ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်စိတ်ခွန်အားနိုးအားနည်းစေ (1), (2) မှမဟာဗျူဟာများပါဝင်သည်ကိုမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ကုသမှုများအတွက် multicomponent မဟာဗျူဟာများ (3) conditional မူးယစ်ဆေးအပြုအမူတွေကိုအားနည်းစေ, ရွေးချယ်မှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုလျော့ကျခြင်းနှင့် nondrug စစ်ကူ၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်အကြံပြု (ထိုမူးယစ်ဆေးယူမောင်းနှင့် (4) တိုကျရိုကျ inhibitory နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအားကောင်းလာစေရန်စားပွဲတင် 2).
စားပွဲတင်2။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏ကုသမှုများအတွက်အဆိုပြုဆေးa
စာပေးစာယူ: Nora ဃ Volkow, MD မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, 6001 အလုပ်အမှုဆောင် Blvd, ROOM တွင် 5274-MSc 9581, Bethesda, MD 20892 ([အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]).
ပြည်သူများအဘို့အလက်ခံခဲ့သည်: ဇန်နဝါရီလ 17, 2007 ။
စာရေးသူထောက်ပံ့:လေ့လာမှုအယူအဆနှင့်ဒီဇိုင်း: Volkow ။ အချက်အလက်များ၏သိမ်းယူမှု: Volkow, ဝမ်, Swanson နှင့် Telang ။ အချက်အလက်များ၏ analysis နှင့်အနက်: Volkow, မုဆိုး, ဝမ်နှင့် Telang ။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏မူကြမ်းရေးဆွဲ: Volkow နှင့် Swanson ။ အရေးကြီးသောဉာဏအကြောင်းအရာများအတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဝေဖန်တည်းဖြတ်မူ: Volkow, မုဆိုး, ဝမ်, Swanson နှင့် Telang ။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: Volkow ။ ရရှိသောရန်ပုံငွေ: Volkow, မုဆိုးများနှင့်ဝမ်။ , အုပ်ချုပ်ရေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပစ္စည်းပံ့ပိုးမှု: Volkow, မုဆိုး, ဝမ်နှင့် Telang ။ လေ့လာမှုကြီးကြပ်မှု: Volkow, ဝမ်နှင့် Telang ။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း / ပံ့ပိုးမှု: ဒီလေ့လာမှုကအရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ intramural program ကအစိတ်အပိုင်းအတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်; ထောက်ပံ့ငွေ DA 06891, DA 09490, DA 06278 နှင့်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institutes ကနေ AA ကို 09481; နှင့်စွမ်းအင်, ဇီဝဗေဒနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သုတေသနရုံး၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန။
ပုဒ်မအယ်ဒီတာ: ဒါဝိဒ်သည်အီးပျော်ရွှင်မှု, MD
Wise RA Brain ဆုအစီအစဉ်သည်ဆင်ဆာမခံရသည့်မက်လုံးများမှထိုးထွင်းသိမြင်မှုဖြစ်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ 2002;36 (2) 229- 240
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတွင် Volkow NDFowler JSWang GJSwanson JM Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာခြင်းနှင့်ကုသမှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှရလဒ်များ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2004;9 (6) 557- 569
Volkow NDWang GFowler JS et al ။ ပါးစပ် methylphenidate ၏ကုထုံးဆေးများလူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာ extracellular dopamine သိသိသာသာတိုးမြှင့်။ J ကို neuroscience 2001; 21 (2) RC121
ကိုကင်းအားဖြည့်ခြင်း၏ Balster RLSchuster CR Fixed-interval အချိန်ဇယား - ထိုးခြင်းနှင့်ပြုတ်ရည်ကြာချိန်။ J ကို Exp စအိုပြုမူနေ 1973;20 (1) 119- 129
Volkow NDDing YSFowler JS et al ။ methylphenidate သည်ကိုကင်းကဲ့သို့လား? လူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ pharmacokinetics နှင့်ဖြန့်ဖြူးအပေါ်လေ့လာမှုများ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1995;52 (6) 456- 463
Grace AA dopamine စနစ်၏စည်းမျဉ်းများနှင့် phasic ပုံစံနှင့်အရက်နှင့်စိတ်ကိုတွန်းအားကိုနားလည်ရန်၎င်း၏ဂယက်ရိုက်မှု။ စှဲမွဲမှု 2000; 95S119- S128
Volkow NDWang GJFowler JS et al ။ detoxified ကိုကင်းအလွဲသုံးစားလုပ်အတွက် striatal dopaminergic တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ သဘာဝ 1997;386 (6627) 830- 833
Martinez DGil RSlifstein M et al ။ အရက်မှီခိုမှုသည် ventral striatum ရှိ dopamine ကူးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် [ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက် ၂၀၀၅ တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်] ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု20055810779786
Schultz W dopamine နှင့်ဆုလာဘ်ဖြင့်တရားဝင်ရယူခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ 2002;36 (2) 241- 263
Volkow NDFowler JS စွဲ၊ မလှူရမယ့်မောင်းနှင်မှုရောဂါ - orbitofrontal cortex ပါ ၀ င်မှု။ Cereb Cortex 2000;10 (3) 318- 325
Vanderschuren LJEveritt BJ မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများ [နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၅] ။ EUR J ကို Pharmacol20055261-37788
dorsal striatum ရှိ Volkow NDWang GJTelang F နှင့် et al Cocaine cues နှင့် dopamine: ကိုကင်းစွဲလမ်းနေသောတွန်းအား၏ယန္တရား။ J ကို neuroscience2006262465836588 [ထုတ်ဝေဆုံးမခြင်းထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် J ကို neuroscience.2006; 26 (27): မာတိကာ] ။
Wong DFKuwabara HSchretlen DJ et al သည် cue- ရူးနှမ်းနေသောကင်းတည့်နေစဉ်အတွင်း striatum တွင်လူ့ striatum တွင် dopamine receptors များတိုးများလာခြင်း [စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ပုံနှိပ်မတိုင်မီအွန်လိုင်းထုတ်ဝေခဲ့သည်; ထုတ်ဝေပြင်ဆင်ချက်အတွက်ပုံပေါ်ပါတယ် Neuropsychopharmacology။ 2007; 32 (1): 256] ။ Neuropsychopharmacology2006311227162727
Thanos PKVolkow NDFreimuth P et al ။ dopamine D2 receptors ကိုအလွန်အကျွံထုတ်ယူခြင်းသည်အရက်ကိုကိုယ်တိုင်သုံးစွဲခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ J ကို Neurochem 2001;78 (5) 1094- 1103
Volkow NDWang GJBegleiter H ကို et al ။ dopamine D2 receptors မြင့်မားသောအဆင့်များသည်ထိရောက်မှုမရှိသောအရက်မိသားစုဝင်များ - ဖြစ်နိုင်သောအကာအကွယ်အချက်များ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2006;63 (9) 999- 1008
ဂျော့ခ်ျ TPO'Malley SS နီကိုတင်းမှီခိုမှုအတွက်လက်ရှိဆေးဝါးကုသမှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ 2004;25 (1) 42- 48
Tonstad STønnesen PHajek PWilliams KEBilling CBReeves KRVarenicline အဆင့် ၃ လေ့လာရေးအဖွဲ့၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန် varenicline နှင့်အတူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုထုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှု။ ဂျေအေအမ်အေ 2006;296 (1) 64- 71
Krantz MJMehler PS opioid မှီခိုမှုကိုကုသခြင်း - မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက်သက်ရောက်မှုကြီးထွားလာခြင်း။ Arch International Med 2004;164 (3) 277- 288
Kosten TOwens SM Immunotherapy မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကိုကုသရန်။ Pharmacol Ther 2005;108 (1) 76- 85
Anton RF ဆေးဝါးဗေဒသည်အရက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုချဉ်းကပ်သည်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 2001;62(suppl 20)11- 17
Comer SDSullivan MAYu အီး et al ။ opioid မှီခိုမှု၏ကုသမှုများအတွက်ထိုး, စဉ်ဆက်မပြတ် - လွှတ်ပေးရန် naltrexone: တစ်ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2006;63 (2) 210- 218
King Ade Wit HRiley RCCao DNiaura RHatsukami D ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း naltrexone ၏ထိရောက်မှု - ပဏာမလေ့လာမှုနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း။ နီကိုတင်းတောဘ Res 2006;8 (5) 671- 682
Maldonado RValverde OBerrendero F မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင် endocannabinoid စနစ်၏ပါ ၀ င်မှု [ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မတိုင်မီတွင်အွန်လိုင်းထုတ်ဝေခဲ့သည်] ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience2006294225232
Whitworth ABOberbauer HFleischhacker WW et al ။ အရက်မှီခိုမှု၏ရေရှည်ကုသမှုအတွက် acamprosate နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ၏နှိုင်းယှဉ်။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 1996;347 (9013) 1438- 1442
Anton RFO'Malley SSCiraulo DA et al ။ ပေါင်းစပ်လေ့လာမှုသုတေသနအဖွဲ့၊ ပေါင်းစပ်ဆေးဝါးကုထုံးများနှင့်အရက်သေစာမှီခိုမှုအတွက်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကြား ၀ င်မှုများ - COMBINE လေ့လာမှု၊ တစ် ဦး ကျပန်းထိန်းချုပ်ရုံးတင်စစ်ဆေး။ ဂျေအေအမ်အေ 2006;295 (17) 2003- 2017
Mardikian PNLarowe SDHedden SKalivas PWMalcolm RJ ကိုကင်းမှီခိုမှုကိုကုသမှုအတွက် N-acetylcysteine ​​၏ပွင့်လင်းမြင်သာသောစမ်းသပ်မှု - ရှေ့ပြေးလေ့လာမှုတစ်ခု [ရှေ့တွင်နို ၀ င်ဘာ ၁၆ ရက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်အွန်လိုင်း] ။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု2007312389394
ဂျွန်ဆင် BAAit-Daoud NBowden Cl et al ။ အရက်သေစာမှီခိုမှုကုသမှုအတွက်ခံတွင်း topiramate: ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှု။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 2003;361 (9370) 1677- 1685
Brodie JDFigueroa ELaska EMDewey SL စိတ်ကြွဆေးနှင့် gamma-vinyl GABA (GVG) သည်မက်သာဖီတမင်းနှင့်ကိုကင်းဆေးဝါးကုသမှုအတွက်ထိရောက်မှုရှိသည်။ synapses 2005;55 (2) 122- 125
Kampman KMPettinati HLynch KG et al ။ ကိုကင်းမှီခိုမှုကုသမှုအတွက် topiramate ကိုရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခု။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပြုမှ 2004;75 (3) 233- 240
Shoptaw SYang XRotheram-Fuller EJ et al ။ ကိုကိုးမှီခိုမှုအတွက် baclofen ကိုကျပန်းရလဒ်များအရအိပ်မပျော်သည့်ထိန်းချုပ်မှု - ကိုကင်းသုံးစွဲမှု၏နာတာရှည်ပုံစံများနှင့်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ပဏာမသက်ရောက်မှုများ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 2003;64 (12) 1440- 1448
ကိုကင်းမှီခိုမှုအတွက် Dackis CO'Brien C glutamatergic agent ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 2003; 1003328- 345
ဂျော့ခ်ျ TPVessicchio JCTermine AJatlow PIKosten TRO'Malley အက်စ်အက်စ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းရပ်ဆိုင်းခြင်းအတွက်ဆယ်လီဂျီလင်းဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်၏ရလဒ်များအရအိပ်မက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောစမ်းသပ်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2003;53 (2) 136- 143